Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Entertainment » 10ka magaalo ee ugu wanaagsan nolosha ardayga ee habeenkii adduunka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Kanada • kariska • dhaqanka • Entertainment • Wararka Hong Kong • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Wararka Singapore • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka
10ka magaalo ee ugu wanaagsan nolosha ardayga ee habeenkii adduunka.
Habeennada ardaydu waa qayb ka mid ah waayo-aragnimada jaamacadda, laga bilaabo usbuucaaga ugu horreeya oo cusub si aad u noqoto imtixaannada dambe. Maaha wax la yaab leh in nolosha habeenkii ay tahay qodob muhiim ah marka la go'aaminayo meesha wax lagu barto.
Montreal waxay ku soo baxday kaalinta ugu sarraysa magaalada adduunka ugu fiican ardayda iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kharashaadka macquula ee macquulka ah, ikhtiyaarrada nolol -maalmeedka iyo is -dhexgalka.
Muuqaalka habeenkii ee Tokyo wuxuu leeyahay xulashooyin kala duwan oo loogu talagalay ardayda leh 1,068 goobo lagu caweeyo wadar ahaan.
Magaalada New York waxay leedahay ku dhawaad ​​kalabar tirada naadiyada marka loo eego labada ugu sareysa, laakiin baararka ugu badan ee LGBTQ+ adduunka.
Marka ay saacaddu garaacdo ee laydhku bakhtiyo, qaar ka mid ah magaalooyinka ugu astaanta badan dunida ayaa nool. Khubarada safarka ayaa falanqeeyay magaalooyinka iyo magaalooyinka jaamacadaha ee dalka oo dhan si ay u go'aamiyaan meelaha ugu wanaagsan ee habeenka ardaygu ka baxo iyadoo lagu salaynayo dheelitirka u dhexeeya gariirka wanaagsan iyo qiimaha cabitaanka miisaaniyadda.
10ka Magaalo Ee Ugu Fiican Ardayda
Guriga in ka badan 200,000 oo arday iyo 35,000 oo arday caalami ah, Montreal wuxuu ku soo baxayaa sida magaalada ugu wanaagsan adduunka ee ardayda iyada oo ay ugu mahadcelinayaan kharashaadka macquulka ah ee nolosha, xulashooyinka cawayska iyo is -dhexgal.
Rank dareenka Country Guuleysiga Guud
2 London Boqortooyada Ingiriiska 6.77
6 Durham, Waqooyiga Carolina United States 6.55
7 Oxford Boqortooyada Ingiriiska 6.26
London waa magaalada labaad ee ugu fiican adduunka ee habeenkii ardayda
Habeennada ardaydu waa qayb ka mid ah waayo-aragnimada jaamacadda, laga bilaabo usbuucaaga ugu horreeya oo cusub si aad u noqoto imtixaannada dambe. Maaha wax lala yaabo cawayska waa qodob muhiim ah marka la go'aaminayo meesha wax lagu barayo.
Guud ahaan, ardaydu waxay raadiyaan inay dheelitirmaan dheelitirka wanaagsan, qiimaha cabitaanka miisaaniyadda, iyo inay haystaan ​​dhawr ikhtiyaar.
10 -ka Magaalo Ee Ugu Sareeya Ardayda Ka Qeyb Galaysa:
Rank dareenka Country Tirada goobaha lagu caweeyo Qiimaha Celceliska Biirka (500ml) Qiimaha Kharashka Is biirsaday
2 London Boqortooyada Ingiriiska 1,053 $ 6.81 / £ 5.00 $ 16.35/ £ 12.00
3 Magaalada New York, New York United States 593 $ 7.64 / £ 5.61 $ 19.08 / £ 14.00
4 Paris France 407 $ 7.55 / £ 5.54 $ 14.99/ £ 11.00
7 Edinburgh Boqortooyada Ingiriiska 186 $ 7.39 / £ 4.25 $ 12.26 / £ 9.00
9 Austin, Teksas United States 172 $ 4.89 / £ 3.59 $ 10.90 / £ 8.00
Oktoobar 21, 2021 at 01: 40
شات عراقنا شات بغديات